21 June 2013 - Fante Online
21st June 2013 - Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Ebͻwbira 21, 2013.
(Friday sermon – 21st June, 2013 – Fante Translation)
HIA A OHIA DƐ EBƐKA NOKWAR.
Hadhrat Khalifatul Masih kenkann Kuran mu nsɛm a odzi do yi fii Surah Al Ahzab:
O! hom nkorͻfo a hom agye edzi! Hom nsuro Allah na hom nka kasapa. Ɔbɛsesa hom ndzeyɛɛ ama hom na Ɔdze hom bͻn akyɛ hom. Na obiara a ͻyɛ setsie ma Allah na No Somafo no, ampaara dɛ obenya nkunyimdzi kɛse papaapa (33:71-72).
Nyankopͻn aka no wͻ kyɛfa yi mu dɛ, yɛmfa Taqwa (tseneneeyɛ) na yɛnka kasa a ͻtsen na enyi da hͻ. Anohoba Mɛsia (ANN)no kyerɛɛw dɛ: Qawl e Sadeed (kasapa) kyerɛ dɛ, bɛka nsɛm a ͻyɛ nokwar trodoo na ͻyɛ nsɛmpa na ͻnnyɛ nsɛm a ͻyɛ akͻhwisɛm, nsɛmhun nye abͻtsirmuka. ‘O! hom a hom agye edzi, hom nsuro Nyankopͻn na hom nka nsɛm a ogyina nokwardzi, pɛrpɛryɛ nye nyansapͻw do’. ‘Mma hom nkasa basabasa na mbom hom nkasa wͻ ber pa nye bea pa mu (Wͻkyerɛɛ ase fii Tafseer Holy Quran Vol. III pp. 731-732).
Dɛm nsɛm yi a Anohoba Mɛsia (ANN) no kyerɛwee no da no edzi pefee dɛ Taqwa (tseneneeyɛ) ba wͻ ber a nokwardzi da edzi wͻ tsebea nyinara mu, wͻ ahohiahia mu anaadɛ enyigye mu o! dɛ ͻyɛ mber a adwen bi bɛba wͻ ber a hom wͻ adwenkyerɛ tsebea mu o! wͻ ber a hom ridzi dase o! wͻ ber a hom nye hom mba nye hom yernom wͻ fie o! ber a hom nye anyɛnkofo nye ebusuafo wͻ hͻ o! wͻ eguadzi mu, ber a hom rotͻn anaa rotͻ biribi o! na ber a obi nye n’edwuma mu panyin wͻ hͻ o!. Ɔwͻ dɛ nokwardzi pefee da edzi wͻ daadaa dwumadzi nye ndzɛmba nsesaa mu, a ͻnnkɛma binom enya nkyerɛasee fofor bi afa ho. Nyimpa binom dwen dɛ, akͻhwi nketenketse a wodzi no dabiara no nnyɛ adze biara. Nyankopͻn ka dɛ, ohia papaapa. Ndzeyɛɛ a ͻtsetse dɛm no nyinara brɛ Taqwa (tseneneeyɛ) gyinabew ase, na ͻtwe onyia no kͻ akͻhwibra mu na ͻma ͻnye Nyankopͻn ntamu twe anaa ͻma Nyankopͻn poow nyimpa a ͻtse dɛm no. Nokwar gyedzifo nye hͻn a wogyina pintsinn wͻ qawl e sadeed (kasapa) mu.
Qawl e sadeed n’ahyɛnsew nye dɛ, dze biara a onyia no bɛka biara yɛ nsɛm a ohia na odzi mu. Ɔnnyɛ ehiadze dɛ adze biara a ͻyɛ nokwar no edze w’ano bɛka. Sɛͻnnyɛ ehiasɛm nye nsɛm a odzi mu mapa a, obotum dze mpaapaa mu nye basabasayɛ aba. Dɛ ebɛka binom hͻn nkitahodzi mu esumasɛm ato gua no dze ntoto ba. Mbom, ͻtͻfabi a, nsɛm bi a ͻnnyɛ nsɛmhia wͻ tsebea bi mu no dan bɛyɛ nsɛmhia wͻ tsebea fofor bi mu. Mfato ho nye dɛ, nsɛmansɛma a wͻdze ba Khalifa a ͻtse egua do n’enyim no hia ma nsiesie. Dɛm nsɛmansɛma yi nnhia dɛ ͻbͻtͻ gua, mbom sɛ opuei a nna ͻyɛ ehiasɛm a ohia papaapa. Ehiasɛm nye nsɛm a atwetwesi biara mmfam ho wͻ qawl e sadeed dzin mu na nsɛm a ntseasee nnyi mu mmbata ho wͻ ber a wͻrekyerɛ ase. Sɛ ͻba no dɛm a, nsɛm no nnda ho nnyɛ qawl e sadeed, mbom nsɛm a ͻtse dɛm no dzi qawl e sadeed ho fɛw.
Ɔtͻfabi a, wͻdze afotu berɛɛw ma ndzɛmba sakyer anaaso edze w’adwen kͻ mu anaadɛ edze ntsea kumaabi dzi dwuma. Mbom, sɛ idzi akͻhwi kyerɛ onyia no a ͻrekyerɛ n’adwen wͻ asɛm no ho a, ͻma ͻdze ntsea dzen bua asɛm no. Ɔnam dɛm ntsi ͻwɛ dɛ wosuo nyansapͻw nye nokwar na pɛrpɛryɛ mu; na ͻyɛ nyansadze dɛ wͻbɛma asomdwee etsim wͻ asetsena ne mpɛnpɛndo biara. Dɛm nyansa yi hia dɛ wͻbɛka biribiara wͻ ne ber na beebi a ͻwͻ dɛ wͻka na ne tͻͻtseen do. Dɛ ebɛka nokwar wͻ ber a ammfa nyansa na tͻͻtseen do no nnyɛ qawl e sadeed. Mbom, ͻdan adze gyangyan na dɛ ͻdze Nyankopͻn N’enyigye bɛba no, obobue N’ebufuwhyew kwan. Dɛ ibenya Nyankopͻn No dͻ gyedɛ ntseasee a ͻkrͻn wͻ Taqwa na qawl e sadeed ho.
Anohoba Mɛsia (ANN) no kaa dɛ ‘Nyimpa wͻ dɛ ͻtow kͻ Taqwa n’akwan a odzi mu no do, hͻ na yiedzi wͻ. Sɛ obi annhwɛ yie wͻ ndzɛmba nketsenketse ho a dabidabi dɛm ndzɛmba nketsenketse yi bɛma obi ayɛ bͻn no a wͻto no abaw a onnhyia. Mbͻtohͻ na pɛtuwhwɛ bɛhɛn mu na ͻdze obi akͻ ͻsɛe mu. Ɔwͻ dɛ etͻ kͻ Taqwa ne nyaa do papaapa na iyi ne nyɛe wͻ Taqwa n’akwan tͻͻtseen yɛ ehiadze papaapa’ (Wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat Vol.8 pp.106).
Anohoba Mɛsia (ANN) no kaa bio dɛ, Nokwar eyiedzi na enyigye nnkɛba wͻ ber a nnyi Taqwa. Sɛ etsena Taqwa mu dzen a ͻyɛ dɛ eronom afadur. Allah Ɔsorsornyi No yɛ nhyehyɛɛ nyinara ma tseneneeyɛ….. ‘Nyia a osuro Allah no –Ɔbobuei kwan ama no na adze biara a ͻrohwehwɛ no Ɔdze bɛma no wͻ ber a n’enyi nnda (65:3-4). Dɛm ntsi Taqwa nye ndzeyɛɛ a ͻtaa eyiedzi ekyir, mbom onnyi dɛ yɛfa no dɛ biribi wͻ dɛ osi ana yeenya Taqwa. Suo Taqwa mu na benya dza erohwehwɛ no. Allah Ɔsorsornyi No yɛ Mbͻbͻrhufo mapa, Noho korɛngyee, suo Taqwa mu na Ɔdze w’apɛdze bɛma wo (Wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat Vol.5 pp.106-107)
Onnyi dɛ wobu Ɔdomankoma Mbransɛm biara tootooba anaadɛ qawl e sadeed mbransɛm a ͻyɛ asetsena asomdwee na nsakyer hͻn fapem. Dɛm ntsi na Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) dze kaa nyamesɛm wͻ aware ho no. Dza ohia wͻ Nikah (Aware) ho nye dɛ ͻyɛ mber a banyan na basia bͻmu tsena wͻ Islam aware nhyehyɛɛ mu na so ͻyɛ kwan a ͻma awow ntoatoado kͻ do. Mbom dɛ mbrɛ yɛaka no dada no, qawl e sadeed nntow nnkͻ ebusua abrabͻ nkotsee ho mbrɛ ͻtse nye dɛ ͻwͻ dɛ otwa fa asetsena nyinara ho. Dɛm ntsi ͻwͻ dɛ yedzi do dɛ mbrɛ Nyankopͻn rohwehwɛ. Nyankopͻn aka dɛ sɛ ehwɛ Taqwa n’akwan fɛɛfɛw no a ͻma iyi asakasakadze tokyen.
Yɛtaa tsie Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) n’enumkasa bi a ͻka dɛ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) maa ͻbarimba bi hyɛɛ bͻ dɛ ofi dɛm da no ͻbɛtsena pi wͻ nokwardzi mu. Ɔkaa dɛ sɛ ͻbarimba no dzi no bͻhyɛ no do a, ne mberɛwyɛ nyinara na ne sintͻ wobenyi efi hͻ. Ɔbarimba mo dzii afotusɛm no do ma no bͻn akɛse na nkakraba nyinara bͻͻ adze. Sɛ dɛm tsebea nyinara twa mu a, Nyankopͻn ma nyinpa ne ndzeyɛɛ sesa. Hͻn a wosuo Taqwa mu na wͻtsena nokwardzi mu pi na Nyankopͻn dze hͻn bͻn a wͻayɛ no dadaw no kyɛ hͻn. dɛm ntsi nnyɛ dɛ wo ndzeyɛɛ nsakyer nko bi mbom bͻn a ayɛ no dadaw nyinara so wͻdze kyɛ wo. Sɛ idzi Nyankopͻn na No Somafo hͻn akwankyerɛ ekyir a eyɛ nokwar gyedzifo ber a isuo Taqwa mu, eyɛ ndzeyɛɛ tsenenee, iyi basbasayɛ akwa na idzi Anohoba Mɛsia (ANN) no n’akwankyerɛ a wͻakyerɛ dɛ ͻyɛ mbransɛm ahaesoun a ͻwͻ Kuran mu no. Iyi so ma wͻdze bͻn a obi bɛyɛ no ekyir kyɛ no. Ɔnam dɛ nsesa aba nyimpadua no mu ntsi, dɛm nyimpa no na bͻn ntamu atwe. Nokwar dɛ Istaghfar (eserɛ bͻn fakyɛ fi Nyankopͻn nkyɛn) ma hͻn ahoͻdzen tsia bͻnyɛ.
Nyankopͻn ka dɛ ͻyɛ “kunyimdzi kɛse” ma nyimpa dɛ obenya Nyankopͻn N’enyigye. Ampaara, setsie wansawansa a ibenya ama Nyankopͻn na No Somafo (NNN) yɛ ehiadze ma dɛm kunyimdzi kɛse no na dɛ edze iyi bɛyɛ edwuma no ohia dɛ ebͻhwehwɛ Nyankopͻn No mboa wͻ ahoͻdzen ho. Dɛm ahoͻdzen yi yebotum enya efi Istaghfar mu. Ɔtwe obi kͻ papayɛ mu na Nyankopͻn gye no abamba na Ɔdze no ka agyedzifo nokwarfo no ho, ͻkyerɛ dɛ hͻn a wͻyɛ anokwarfo no na wͻdze nokwar no tahye no na wͻpa twer Taqwa no. Taqwa dze obi kͻ ‘nkunyimdzi kɛse’ yi mu na hͻn a wonya dɛm ‘nkunyimdzi kɛse’ yi, hͻn nye ahotseweefo no. Ɔwͻ dɛ yɛbͻ mbͻdzen nya dɛm gyinabew yi.
Anohoba Mɛsia (ANN) no kasaa faa nokwardzi ho dɛ: Nokwar a yehu no adwen mu yɛ adzepa, ͻma nyimpa ntseasee a ͻkye wͻ obi so no nokwardzi ho. Akokodur na ntsimii wͻ nokwardzi mu na mbom ͻkͻhwinyi yɛ okotobonyi. Obi a ne bra hyɛ adzehuhuw na ndzeyɛɛhun mu no, ber biara ͻbͻ hu na onntum nnsi mpire. Onntum mmfa akokodur na ntsimii nnda no nokwardzi edzi dɛ mbrɛ nokwarfo yɛ eso onntum nnkyerɛ n’ahotsewee. Ɔwo tow w’adwen to wiadze nsɛm ho kakra na hwɛ. Ana obi wͻ hͻ a Nyankopͻn adom no gyinabewpa wͻ ͻbra mu a wͻnntan no a? Obiara a ͻwͻ gyinabewpa wͻ atamfo a wotsiw no. Dza ͻfa no nyamesom ho no tse dɛmara. Abͻnsam yɛ nsakyermu ͻtamfo. Nyimpa wͻdɛ ͻma ne ndzeyɛɛ da edzi yie na ͻdze ne dwumadzi wͻ Nyankopͻn ho toto yie na ͻma Nyankopͻn dzi dɛw na onnsuro obiara eso ͻnnhwɛ dza obi reyɛ ho. Oyi ndzeyɛɛ a ͻbɛma ͻ’akͻ mpͻnse mu akwa. Mbom, iyinom nyinara nnkɛba mu gyedɛ ͻnam Ehuntahunii na Ɔdomankoma mboa do. Dɛ nyimpa bɛkenyan noho ayɛ biribi kɛkɛ nnkedzi mu ewie gyedɛ Nyankopͻn N’adom wͻ mu…… ‘wͻbͻͻ nyimpa wͻ mberɛwyɛ mu’(4:29). Nyimpa yɛ mberɛw na ndzehun ahyɛ no ma na ehyiakwa etwa noho ehyia n’afaafa nyinara. Dɛm ntsi ͻwͻ dɛ ͻyɛ asͻr kyerɛkyerɛ Allah Ɔsorsornyi No bɛma o’enya mboa efi Nyia enyi nnhu No na Ɔdze N’adom no adom no (Wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat Vol.10 pp.252).
Nyimpa nye ehyiakwa dzi mpu na mpu wͻ wiadze na nyamesom nsɛm ho. Ɔnam Nyankopͻn N’adom, Taqwa na nokwardzi do, dɛm ehyiakwa yi botum efi hͻ. Ɔtͻfabi a, nokwar ne nkaa dze obi kͻ ahokyer mu mbom onyia no yɛ nokwardzifo a onya ahosan. Ɔtͻfabi so a, nokwar ne nkaa wͻ obi noara no nkorͻfo mu dze no kͻ ahokyer mu osiandɛ nkorͻfo a wͻwͻ su asorͻtow wͻ mu. Iyi kyerɛ dɛ Taqwa tͻ sin wͻ hͻ. Mfatoho bi nye dɛ, hɛn mber yi mu yi, wͻtow aba wͻ wiadze ne fɛnandze nyinara na Hadhrat Khailfatul Masih nya sombo pii. Nkorͻfo ka dɛ wͻtoow aba maa nyimpa bi anaadɛ dzibewdzifo bi bisa dɛ ebɛnadze ntsi na wͻtoow aba maa dɛm osimasi yi? Jama’at abatow mu no obiara wͻ ho kwan dɛ obebisa siantsir a wodzii dɛm dwuma no. Sɛ dɛm mberɛwyɛ yi da edzi wͻ obi no mu a, ͻno wͻnnkɛba bio osiandɛ hͻn mberɛwyɛ na hͻn sintͻ no bɛsan ada edzi bio. Iyi befi Taqwa a wonnyi, ͻyɛ a nkorͻfo ka dɛ wohu dɛ dzibewdzifo bi wͻ tsirmupͻw bi wͻ noho. Iyi yɛ Taqwa a onnyi hͻ na nokwardzi a onnyi hͻ. Ɔwͻ dɛ yɛhyɛ no nsew aber biara dɛ, sɛ obi nam tum kwan do kyerɛ n’adwen a, nna nokwardzi na Taqwa wͻ kwan-da-mu mu. Ampaara, ͻwͻ dɛ wͻhwehwɛ Nyankopͻn N’adom na sɛ Nyankopͻn N’adom no wͻ hͻ a, obiara nnkotum ayɛ hwee. Hɛn a wͻwͻ tsirmupɛw yi, ͻyɛ a wonya Nyankopͻn ne ntsea. Ɔnntse dɛm, dɛ Jama’at ne nhyehyɛɛ nye dɛ obiara wͻ ho kwan dɛ ͻyɛ n’apɛdze, ͻyɛ a ͻbɛyɛdɛ w’akasa hͻn.
Anohoba Mɛsia (ANN) no ka dɛ, ͻtͻ ka dɛ nyimpa pii noara gye to mu dɛ obiara nnyi hͻ a ͻfata dɛ wͻsom no na wͻgye Nkͻmhyɛnyi (NNN) so dzi, na wͻyɛ asͻr (Salat) na wͻkyen kͻm (fasting), naaso wonnya sunsum mu mpontu biara a ne siantsir ara nye dɛ, wͻka dɛm nsɛm yi wͻ hͻn ano kɛkɛ dɛ ͻyɛ kusum amandze bi. Wonnyi sunsum mu nokwardzi biara ka ho. Sɛ ͻntse dɛm a ebɛnadze ntsi na dɛm nkorͻfo yi nnyi nhyira na sunsum mu kandzea biara yi? Hom nkaa dɛ gyedɛ dɛm dwumadzi yi yɛdze nokwardzi wͻ akomapa nye sunsum mu, ͻno iyinom nnkenya nsunsuando pa biara. Papayɛ yɛ papayɛ wͻ ber a nna basabasayɛ biara nntaa ekyir. Nyimpa a odzi mu nye obi a basabasayɛ nnyi n’afa (Wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat, Vol. 6, pp. 237-238).
Ber a wͻma nyimpa yi nsɛm nketsenketse ano, na wͻatseetsee hͻn no, iyinom nyinara ka basabasayɛ ho. Ɔwͻ dɛ ber biara yɛbͻ hɛnho adze hwɛ dɛ yɛreyɛ papa. Sɛ Nyankopͻn pɛ a, na obi ne ndzeyɛɛ nya nsakyerpa. Ɔyɛ tsenenee ne nsɛnkyerɛdze dɛ hͻn a wͻyɛ Nyamesomfo hwɛ dɛ hͻn ndzeyɛɛ bͻsͻ Nyankopͻn N’enyi. Osiandɛ iyi hia Nyankopͻn N’adom sɛ edan woho kͻ Ne nkyɛn a na eserɛ bͻnfakyɛ a (Istigfar).
Anohoba Mɛsia (ANN) no ka dɛ, ana nyimpa dwen dɛ sɛ ͻdze n’ano famfa ka Kalima a (dɛ obiara nnyi hͻ a ͻfata dɛ yɛsom no gyedɛ Allah) na ͻka astaghfirullah (meserɛ bͻnfakyɛ) a ͻsombo ma no, na hom nhu dɛ edze w’ano ka dɛm kɛkɛ a ͻnnsom bo. Ɔmmfa ho dɛ obi bɛka astaghfirullah mpɛn apem anaa ͻkɛka Tasbih (Allah yɛ Krͻnkrͻn) mpɛn ͻha a, ͻrennyɛ mfaso biara osiandɛ Nyankopͻn ayɛ nyimpa, nyimpa mbom wͻannyɛ no ekoo. Aboa ekoo na ͻkasa na ͻsan si do mpɛn pii a dza ͻreka no mpo ͻnntse ase. Nyimpa na ͻwͻ dɛ ͻdwen ansaana ͻakasa, na ͻdze akͻ nyɛe do. Na sɛ osi ne nsɛmdo dɛ mbrɛ ekoo yɛ no dza, ͻno ma onhu dɛ nhyira biara nnyi mu sɛ ͻdze n’ano famfa kɛkɛ dza. Gyedɛ ͻyɛ no wͻ akoma mu anaa ͻdze kͻ nyɛe do. Dza edze w’ano bɛka no kɛkɛ no nnya nhyira biara kansa Kuran na erekan anaa istighfar na ereyɛ mpo a. Nyankopͻn hwehwɛ ndzeyɛɛpa dɛm ntsi na Otsi mu ka dɛ hom nyɛ ndwumapa, hom nyɛ ndwumapa, ͻno hom nnkotum abɛn Nyankopͻn. nkwasiafo bi ka dɛ, wͻakenkan Kuran no nyinara da kor ewie. Hom mbisa hͻn dɛ ebɛn mfaso na woenya efi mu? Wͻdze hͻn ano famfa kenkan na wͻmmfa hͻn akoma nndzi do wͻ hͻn akwan mu wͻ ber a Nyankopͻn ahyɛ hɛn dɛ yɛdze hɛn honamdua akwaa nyinara bɛyɛ edwuma. Iyi ntsi Hadith bi ka dɛ, obinom wͻ hͻ a wͻkenkan Kuran naaso Kuran no domm hͻn. osiandɛ wͻdze hͻn ano famfa kɛkɛ no wͻdze kenkan a wͻmmfa nnkͻ nyɛe do (Wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat, Vol. 6, p. 398-399).
Anohoba Mɛsia (ANN) no ayɛ no ahyɛsewdze dɛ hͻn a wͻka no kuw no ho no dzi Kuran no mu mbransɛm ahaesoun (700) no nyinara do. Ɔwͻ dɛ obiara dze n’enyi si iyinom do na ͻdze mbransɛm nyinara yɛ edwuma. Anohoba Mɛsia (ANN) no ka no bio dɛ obiara a ͻmmfa Nyankopͻn Ne mbransɛm nnyɛ edwuma no, obu No enyimtsia osiandɛ, dɛ edze ano bɛkenkan biribi kɛkɛ no nnyɛ adze a Nyankopͻn N’enyi gye ho gyedɛ ͻdze kͻ nyɛe do. Sɛ obi kenkan India man no mu mbransɛm no dabiara na sɛ wͻammfa annyɛ edwuma a, na mbom ͻyɛ dza otsia mbra bi tse dɛ kɛtɛasehyɛ nye dza ͻkeka ho a, na sɛ wͻkyer no a, ana obenya ano yi dɛ dabiara ͻkenkan mbransɛm no ntsi onndzi fͻ anaadɛ wͻbɛma no asotwe a no mu yɛ dzen osiandɛ ber biara ͻkenkan mbransɛm no ber nyinara naaso onndzi do wͻ ber a onyim mbra no. Sɛ ͻwͻ dɛ wͻdze no to efiadze afe kor a, wͻbɛma no mfe anan fiadze ndaa (Wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat, Vol. 6, p. 399).
Anohoba Mɛsia (ANN) no san ka dɛ, anosɛm kɛkɛ nhyɛ ma so. Ɔdɛ, ͻwͻ dɛ nyimpa kͻ ahokyer mu wͻ Nyame ntsi ama woenya Nyankopͻn N’enyigye. Sɛ ͻyɛ dɛm dza, Nyankopͻn bɛma no nkwa tsentsen. Nyankopͻn nnto N’anohoba. Nyankopͻn abͻ anohoba dɛ dza ͻyɛ mfaso ma adasamba no, ͻka asaase yi do, na iyi yɛ nokwar pefee. Ɔyɛ nokwar so dɛ obiara nsɛe dza ͻyɛ mfaso ma no. Woana na oboku n’anyamboa bi tse dɛ ponkͻ, nantwi anaa oguan a noho wͻ mfaso ma no papaapa, mbom sɛ aboa a ͻtse dɛm no, sɛ mfaso biara nnyi noho a, ͻno wokum no.
Huzoor kaa dɛ, ͻwͻ dɛ yɛdwen nsɛm yi ho. Dɛmara sɛ nyimpa bi noho nnyi mfaso wͻ Nyankopͻn enyim na no ho nnyi mfaso ma adasamba a, ͻno Nyankopͻn nhwɛ no, mbom ͻsɛe no dɛ adze gyangyan bi. Hom nhu dɛ kasa ara kwa nnyɛ mfaso biara, gyedɛ ndzeyɛɛpa taa ekyir na yɛdze nsa, nan na honamdua n’akwaa nyinara yɛ edwumapa. Nyankopͻn yii Kuran no dwirii naaso esuafo no somm mbransɛm no. Ana wͻfa no dɛ wͻdze Ne mbransɛm no bɛyɛ edwuma? Wodzii nokwar na wͻyɛɛ setsie kɛpem dɛ wͻdze hͻn akra bͻͻ afͻr dɛ mbrɛ wͻyɛ sebe mbowa. Dza wonyaa wͻ afͻrbͻ yi ekyir nye kwan a Nyankopͻn faa do hyɛɛ hͻn enyimnyam a ͻda edzi pefee. Sɛ epɛ dɛ ibenya Nyankopͻn N’adom dza, ͻno bͻ mbͻdzen na yɛ ndwumapa, annyɛ dɛm a, wobeyi wo tokyen dɛ agyangyadze bi. Obiara nnyi hͻ a ͻtoow n’egudzi tse dɛ sika kͻkͻͻ anaa silbo kyen, mbom ndzɛmba a ͻsombo dɛm no ͻbͻ ho ban ara yie. Dɛm saso na yehu sɛ obi wu a, yɛtoow no kyen ntsɛmara. Dɛmara so na Nyankopͻn hwɛ No nkowa a wͻyɛ atseneneefo do yie. Ɔmma wͻnnsɛe hͻn na Ɔmma wonnwu akotobͻ wu. Mbom obi a obu Nyankopͻn Ne mbra do no na Ɔsɛe no. Sɛ hom pɛ dɛ Nyankopͻn bu hom bi dza, ͻno hom nyɛ atseneneefo dɛ mbrɛ hom bͻsom bo wͻ Nyankopͻn enyim. Nyankopͻn dze nsonsonee to hͻn a wosuro No no nye hͻn a wͻaka no ntamu.
Nyankopͻn Ne nhyira mu esumasɛm nye dɛ obi bosuro Nyankopͻn na o’ekyir bͻn. Nyimpa a ͻyɛ dza ͻtse dɛm no sombo osiandɛ ͻda ahotsewee edzi. Onya tsema ma mbͻbͻrfo na ͻyɛ ayɛmuyie ma hͻn a ͻnye hͻn tse ntabakamu nyinara, ͻnnyɛ basabasaa na ͻmmfa nsɛm nnto binom do wͻ asɛndzibea. Onndzi dase kurum, ͻtsew n’akoma ho na ͻtͻ kͻ Nyankopͻn nkyɛn ber na ber nyinara na wͻfrɛ no Nyankopͻn adamfo (wͻkyerɛɛ ase fii Malfuzat, Vol. 6, p. 399 - 401).
Kɛtseankyɛ yɛayɛ nyamesomfo na yeegyina pitsinn wͻ nokwar mu na yɛayɛ setsie ama Allah nye No Somafo no. Yɛserɛ dɛ Nyankopͻn nhu hɛn mbͻbͻr na Ɔnkata hɛn bͻn do na Ɔmma hɛn dwumadzi nyinara nsͻ N’enyi na Ɔmmfa hɛn nka hͻn a wͻagye hɛn ndwuma atomu noho. Kɛtseankyɛ yenya Nyankopͻn N’adom na yennya botae a ͻnam do ma Ɔdze soma Anohoba Mɛsia no na yɛnyɛ aboafo wͻ botae a ͻtse dɛm yi ho na yenya Nyankopͻn N’adom nye No dͻ.
Hadhrat Khalifatul Masih dze onua kor a woekum no wͻ Nyame kwan mu ho nsɛm too gua. Wͻfrɛ dɛm onua yi Jawad Karim sahib. Nna ofi kurow bi a wͻfrɛ no Green Town a ͻwͻ Lahore na wokum no bosom Ebͻwbira no da a ͻtͻ do 17. Obi bͻtoo hyɛɛ no do wͻ ne fie na ͻtoow no itur kum no. Nna onua Jawad tse abansor na n’awofo so wͻ famu. Anafua a nna ndͻn esoun abͻ apa ho sima eduonan enum (7:45) na ͻhͻho bi bͻɛɛ wuraa ne fie hͻ na ͻtoow itur bͻͻ no. itur a wͻtoowee no kaã n’akoma. No nua banyin tsee dede no, opuei na ewudzifo yi totoow itur kaa kyerɛ no dɛ ͻnnsan n’ekyir annyɛ dɛm a wͻboku no so. Onua yi fii mu wͻ ber a wͻnam kwan dze no rokͻ asopitsi. Ahmadiyya som no baa n’ebusua mu a, nna ͻnam ne nana basia no do, nna ͻyɛ Anohoba Mɛsia (ANN) n’aber do nkorͻfo no bi. Onua Jawad dzii mfe eduosa ebiasa (33) na nna ͻyɛ Moosi. Nna ͻnoara wͻ n’edwuma na ne yer so yɛ datsernyi na ͻnoara so wͻ n’ayarsabea. Nna ͻyɛ ͻhobrasenyi, nokwardzifo na ͻwͻ tsema ma obiara. Ɔdze ne fie yɛɛ asͻrdan mber pii. Onyaa dzibew wͻ Khuddam Kuw no mu wͻ gyinabew ahorow pii. Na ͻbͻͻ sika afͻr piinara. Ogyaa ͻyer na mbofra ebiasa wͻ ekyir.
Ne maame Razia Karim Dehlvi sahiba a wͻwoo no wͻ mfe 1947 no, nyaa akoma yarba wͻ ber a nna wͻresie Jamad no na ͻno nso fii mu. Nna ͻyɛ skuul kyerɛkyerɛfo panyin. Yɛserɛ dɛ Allah mma ewufo yi tsenabew pa na Ɔmmbͻ hͻn ebusuafo ho ban na Ɔmma wonnya nkitahodzi a no mu yɛ dzen wͻ Jama’at yi mu. Ber a Huzoor dze ne hyɛdzen nsɛm kɛmaa hͻn ebusuafo no, Jawad ne nua banyin buaa dɛ, hɛn dze, yɛayɛ krado dɛ yɛdze hɛn nkwa bͻbͻ afͻr ama Jama’at yi mber nyinara.
Nyankopͻn mma hͻn akokodur na Ɔmmbͻ hͻn ho ban. Huzoor kaa dɛ ͻbɛyɛ hͻn funsie asͻr.